ခင်မင်းဇော်: တွေးမိသမျှ (၂)
မျိုးဆက်ပေါင်းများစွာ နှစ်ရှည်လများ ဖိနှိပ်ခံလိုက်ရတဲ့အခါ လူတွေရဲ့ မဟုတ်မခံ ဗီဇ သတ္တိတွေ ပျောက်ဆုံးသွားလေသလား….
အာဖရိကတောကြီးထဲမှာ မြင်းကျားတွေ၊ သမင်တွေကို ခြင်္သေ့တွေ ခွေးအတွေ လိုက်ဆွဲတဲ့အခါ ထွက်ပြေးကြသလိုမျိုး၊ မြန်မာတွေရဲ့ ဗီဇစိတ်မှာ ထွက်ပြေးဘို့ ပိုအားသန်ကြလေသလား….
လူတွေရဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရားကို အကြောက်တရားက ဖုံးလွှမ်းသွားပြီဆိုရင် မဖြစ်သင့်တာတွေ ဖြစ်လာတော့တာပါဘဲ။
လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကို မကန့်ကွက်ပါ။ စစ်အစိုးရကို တောထဲတောင်ထဲမှာ ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံ ခါးစည်းခံရင် တော်လှန်နေကြသော ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သား ကျောင်းသားရဲဘော်များ အပေါ်တွင် ချစ်ခင်လေးစားမှုရှိပါသည်။
သို့သော်…. လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဘို့ရာ ပထမ လူအင်အား၊ နောက် ငွေအင်အား (လက်နက်၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်၊ ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာ၊ ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆေးဝါး၊ရိက္ခာ စသည်များအတွက်) အတော်တောင့်တင်းဘို့ လိုသည်ထင်ပါသည်။ ဒေါ်လာ သန်းနှင့်ပင် ချီ၍ လိုနိုင်ပါသည်။
ကျနော်တို့က လူစိုက်နိုင်သည် ထားဦး။ ထို၍ ထိုမျှငွေပမာဏကို ကျနော်တို့ ရဘို့ လမ်းကို စဉ်းစား၍ မရသေးပါ။ နိုင်ငံခြားအစိုးရများမှ အကူအညီမှာ ယခု ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းအရ မဖြစ်နိုင်။ ပြည်ပရောက် မြန်မာအဖွဲ့အစည်းများအတွင်းမှာလည်း ထိုမျှငွေကို ထောက်ကူနိုင်သည့် အင်အားမရှိ။
လောလောဆယ် ပြည်ပမှ ထောက်ပံ့နေသည့် ငွေအင်အားမှာလည်း ဆင့်ပါးစပ် နှမ်းပက်သလို၊ အင်မတန် နည်းပါးလှပါသည်။ (ပြည်ပက မြန်မာတွေအနေဖြင့်လည်း လှူဒါန်းငွေ သက်သက်ကိုသာ အားမကိုးဘဲ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပူပေါင်း ထူထောင်ကာ ရံပုံငွေ ရှာသင့်နေကြပါပြီ။ ၀မ်းသာစရာကောင်းသည်မှာ နိုင်ငံတချို့က အဖွဲ့အစည်းများ စတင်လုပ်ဆောင်နေကြပြီ။)
နောက်တခုက စစ်မြေတလင်း ဖြစ်လာခဲ့ရင် အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်တွေ အနည်းနှင့် အများ ပျက်သုဉ်းကြဦးမည်။ ယခု စစ်မြေတလင်း မဖြစ်သေးပေမယ့်လည်း ပြည်သူတွေ အကြောင်းမဲ့ အသတ်ခံနေကြရသည် မဟုတ်လား ဟု မေးစရာရှိပါသည်။ သို့သော် စစ်ကို ကိုယ်တိုင်မကြုံဘူး ပေမယ့် အင်မတန် ခါးသီးမည့်အကြောင်းတွေကို မှန်းဆလို့ရနေပါသည်။
ယခုလောလောဆယ် ကျနော်အနေနှင့် ပိုမိုအားသန်နေသည်က ပြည်တွင်းက လူထုအားဖြင့် စစ်အစိုးရကို ဖြုတ်ချဘို့ ဖြစ်ပါသည်။ လူထုရဲ့ နိုင်ငံရေးအသိစိတ်ကို မြှင့်တင်ဘို့၊ လူထုကို စည်းရုံးဘို့၊ နောင်အချိန်မရွေး ထပ်မံပေါ်ပေါက်လာမည့် လူထုအုံကြွမှုကြီးများတွင် ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများမှ စနစ်တကျ ဦးဆောင်မှုပေးနိုင်အောင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု၊ လျို့ဝှက်ဖွဲ့စည်းထားမှုတွေ အခုက စတင်လုပ်ဆောင်ကြဘို့ လိုသည်ထင်ပါသည်။ ကျနော်သိရသလောက် တချို့လည်း စလုပ်နေကြပါပြီ။ သို့သော် ယခုထက်ပိုမို ၀ိုင်းဝန်းကြဘို့ လိုပါသည်။
သည်လိုအခြေအနေတွေ ဖန်တီးနိုင်ဘို့ ပြည်ပကမြန်မာတွေအနေဖြင့် အများကြီး ကူညီ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့ ယခုထက် ပိုကြိုးစားကြဘို့ဘဲ လိုပါသည်။